नाटो: डिकोड र इतिहास
यो संरचना हाम्रो countrymen बीचमा धेरै मिश्रित प्रतिष्ठा छ। सोभियत अवधिमा यो युद्ध अपराधको संग विशेष सम्बन्धित र यसको सैनिकहरु को कोहनी हात गर्न रक्तपातपूर्ण थियो। आज, प्रतिनिधित्व यस प्रकारको पनि वर्तमान छ, तर सबै नै यो एक सम्पूर्ण रूपमा नरम छ। आजको समाजमा नाटो बारेमा विभिन्न भावनाहरू छन्। तर के वास्तवमा नाटो? यो अवधारणा को डिकोडिङ यसलाई सुनिन्छ रूपमा? हामी यो बुझ्न सहमतिलाई को उद्भव र यसको गतिविधिहरु को आधारभूत सिद्धान्तहरू पृष्ठभूमिमा हेर्न।
नाटो। डिकोड अवधारणाहरु
वास्तवमा, यो सोभियत राज्य मिडिया सम्बन्ध प्रकाश मा देखा छ कि छैन अचम्मको छ। आखिर, पनि आफ्नो उपस्थिति मूल विरोधी-सोभियत वर्ण थियो। रूपमा निम्नानुसार यस्तो लेखिएको जो ट्रान्सक्रिप्ट - नाटो: उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन - सोभियत हस्तक्षेप देखि युरोप र अमेरिका रक्षा गर्न क्षेत्रीय गुट रूपमा स्थापित भएको थियो। संघ नेतृत्व, आफैले पहिला आक्रमण गर्ने देश वा व्यक्ति विचार जो गर्दैन र instigators र, शीत युद्ध को unfolding पाठ्यक्रम को अपराधियों बारेमा धेरै विचार थियो, यो आफूलाई विरुद्ध प्रत्यक्ष आक्रमण रूपमा लिए। यसरी, नाटो (शब्द को ट्रान्सक्रिप्ट) उत्तर एटलान्टिक सैन्य गुट मा देशहरूको संघ छ।
पश्चिमी मित्र को राजनीतिक सर्कलमा द्वितीय विश्व युद्ध को अन्तिम चरणमा पनि आफ्नो अर्को प्रतिद्वन्द्वीको हुन सक्छ कि सोभियत संघ तथ्यलाई बारेमा कुरा हिंड्न थाल्छन्। साँच्चै, समग्र विजय नजिक आउनु, तर त्यसको विपरीत, हिजोको मित्र विभाजित। एक साधारण लक्ष्य को अभाव मा पूर्व (र हिटलर का जर्मनी को अनुहार मा खतरा सबै मतभेद भूल बाध्य) र पश्चिम सबै तेजी एक प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी बन्दैछ।
आजको इतिहासकारहरूले Fulton मा विन्सटन चर्चिल द्वारा प्रसिद्ध बोली संग शीत युद्ध को औपचारिक शुरुवात श्रेय छन्। शीत युद्ध को शुरुवात पूर्वी र मध्य युरोप को एक नम्बर मा प्रो-समाजवादी regimes स्थापना प्रस्ट पहिले नै थियो। शिखर मतभेद समयमा देखा को बर्लिन संकट। सैन्य संघर्ष को खतरा हो को अनुहार मा एकजुट गर्न पश्चिमी देशहरूमा बाध्य छ "कम्युनिस्ट खतरा।" र नाटो अप्रिल 1949 मा देखा परे। पोर्चुगल, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, लक्जमबर्ग, इटाली, डेनमार्क, नर्वे, आइसल्याण्ड, फ्रान्स, क्यानाडा, बेलायत र अमेरिका: संगठन आपसी बाह्र देशहरूको एक सन्धि हस्ताक्षर गरेर स्थापित भएको थियो। लिथुआनिया, लाटभिया र इस्टोनिया: पछि तिनीहरूले पूर्व सोभियत गणराज्यहरु सहित अन्य धेरै देशहरूमा द्वारा सामेल थिए। नाटो, यसको मुख्य उद्देश्य रूपमा सुरक्षा टैग: जो गूढ रहस्य acronyms आपसी ग्यारेन्टी यसको उत्तर अमेरिका र युरोप मा सबै सदस्यहरूको सुरक्षा र स्वतन्त्रता घोषणा। यसको लक्ष्य हासिल गर्न संगठन यसको आफ्नै राजनीतिक प्रभाव र सैन्य क्षमता प्रयोग गर्दछ। खैर, समाजवादी राज्य को छ वर्ष पछि आफ्नै सम्बन्ध बनाएको छ, तर यो लेखको विषय होइन।
"Reservoir" वा "जंगली"? हिज्जे -nn- प्रत्यय। प्रत्यय -n-
ब्रिटिश पल्ट, टेबल मा उदाहरण संग। अंग्रेजी काल
Decl - रूस वा भाग्यशाली गर्ने भाग्यशाली व्यक्तिहरूलाई मा र्याप को निर्माता छ? हिप-हप संस्कृति को चढाई तारा इतिहास
कसरी रूसी भाषा गरे? रूसी भाषा को गठन
संसारको नीति: घटनाहरू र व्यक्तित्व
राम्रो छ - एक महिनाको लागि लेंस सम्पर्क? कसरी एक महिना लागि संपर्क लेंस लगाउन?
विश्वव्यापी पहेली अन्तर्गत पीठ: समीक्षा
ICloud। आफ्नो पासवर्ड बिर्सनु भयो? त्यहाँ पुन: प्राप्त गर्न एक तरिका हो!
स्वाग - शैली कस्तो? विस्तृत विवरण
Travertine - यो के हो? सुविधा र सामग्रीको विशेषताहरु
डायपर Lovular: समीक्षा, प्रजाति विवरण। नवजात शिशुहरु लागि दर्जा डायपर
सार "पिता र सन्तान" (आई। टरूनेव)
हुलाक सेवा Ermail: साइट बारेमा प्रतिक्रिया
के (बाल लागि) कुकुर लागि भिटामिन चयन गर्न?
स्वस्थ पलायन प्राप्त गर्न कसरी लाल-पनीदार कछुआहरू खुवाउन
छोटो कपाल मा balayazh Staining: प्रक्रिया, विधि, समीक्षा उपकरण, र प्रदर्शन को विवरण